Mee atụmatụ njem dị ukwuu na Malta | Akụkọ Njem
Malta bụ otu n'ime ebe ndị ahụ dị mma maka obere oge ezumike, n'ihi na n'oge na-adịghị anya anyị nwere ike ịnụ ụtọ ebe ahụ. Na mgbakwunye, nke a agwaetiti Mediterenian A pụkwara ileta ya na oge dị ala, n'ihi na anyị nwere ike ịnụ ụtọ ebe niile iji hụ ma nwee ọdịdị mara mma. Ọ bụrụ na anyị ejiri obere oge mee ihe, anyị ga-enwe nnukwu ọnụ ahịa yana uru agaghị enwe igwe mmadụ.
En Malta Anyanwụ na-awa fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ niile, yabụ anyị nwere ike ịnụ ụtọ njem dị mma, ụbọchị n'ụsọ osimiri na nnukwu ụzọ iji hụ akụkụ ya niile na-enweghị nchegbu gbasara ihu igwe, ihe ọzọ kpatara iji were ụfọdụ tiketi gaa Malta. Kwadebe njem gị wee chọta ihe niile ịchọrọ iji hụ nnukwu agwaetiti Mediterenian a.
1 Ebee ka ịnọ na Malta
2 Ga Malta
3 Ihe ndi ozo banyere njem
4 Ihe ị ga-ahụ na Malta
4.2 Agwaetiti Comino
4.3 Agwaetiti Gozo
4.5 Obodo Malta
Ebee ka ịnọ na Malta
Na Malta anyị nwere ike ịchọ ebe obibi n'akụkụ agwaetiti niile, mana eziokwu bụ na enwere ebe atọ ebe a na-achọkarị ya n'ihi na e nwere ọtụtụ onyinye. Mpaghara Sliema ama ama ama, ịbịaru Valletta nso, iji ụgbọ njem na-arụ ọrụ nke ọma yana ebe dị jụụ ebe izu ike n'abalị. Saint Julians bụ ebe ndị na-eto eto chọrọ ịnọ, ebe ọ bụ mpaghara ndụ abalị. Nhọrọ ọzọ bụ ịnọ na ebe etiti akụkọ ihe mere eme nke Valletta, mana nke bụ eziokwu bụ na ịchọta ebe dị ọnụ ala ga-esitụ ike, belụsọ na anyị ga-aga n'oge dị ala. Mgbe anyị na-ahọrọ ebe obibi, anyị ga-eche ma ọ bara uru ịbelata iji ụgbọ njem ọha ma ọ bụ ịnọ na mpaghara dị ọnụ ala karịa nke ọma.
Anyị nwere ọtụtụ nhọrọ ịtụle mgbe anyị na-agagharị na Malta. Na mpaghara kachasị etiti enwere ike iji ụgbọ ala, ọ bụ ezie na n'ozuzu ọ naghị arụ ọrụ nke ọma na mba ndị ọzọ. Taksị na-adịkarị oke ọnụ, yabụ anyị echeghị na ha bụ nhọrọ kacha mma. Otu n’ime ihe ndị mmadụ na-eme bụ gbazite ụgbọ ala ịgagharị n'agwaetiti ahụ n'enweghị nsogbu, ebe ọ na-adịghị ọnụ ọnụ ma anyị echefukwa banyere ichere na nkwụsị. N'ezie, anyị ga-echeta na ebe a anyị na-anya ụgbọ ala dị ka England, yabụ ọ bụrụ na anyị enweghị omume ọ ga-efu anyị na mbido. Ebe anyị bụ obere agwaetiti, anyị nwekwara ike ịchọta njem site n'ụgbọ mmiri ma ọ bụ obere ụgbọ mmiri iji si n'otu akụkụ agwaetiti ahụ gaa n'akụkụ nke ọzọ.
Ihe ndi ozo banyere njem
Gagharị na Malta pụtara ịgagharị n'otu mba nke European Union, yabụ ọ bụrụ na anyị bụ nke ya, anyị agaghị achọ ihe ọ bụla karịa DNI iji gaa. Banyere ego, jiri euro. Ekpuchi nlekọta ahụike na kaadị ahụike Europe, nke anyị ga-arịọ tupu njem ahụ.
Ihe ị ga-ahụ na Malta
Malta abụghị nnukwu agwaetiti, nke anyị nwere ike ịhụ na ụbọchị ole na ole ma ọ bụrụ na anyị ejedebe na ebe ndị njem nleta kachasị, na-eleta obere agwaetiti kacha nso. Anyị ga-arara oge maka isi obodo nke Valletta, ebe dị mkpa iji nwee ọ .ụ ebe akụkọ ihe mere eme na okporo ámá ndị mara mma.
La Valletta bụ isi obodo Malta, ebe na-adịchaghị obosara, mana o nwere ebe ụfọdụ a ga-ahụrịrị. Ebe ewusiri ike nke St. Elmo, nke Baroque-nke St John's Co-Katidral na ụfọdụ ụlọ ngosi ihe mgbe ochie, dị ka nke ochie.
La Agwaetiti Comino Ọ bụ ebe a na-ebighi ma ọ na-eleta ndị njem nleta na ferries na-ahapụ Malta. Nwere ike ime ọmarịcha nleta otu ụbọchị, ọkachasị n'oge ọkọchị, iji saa ahụ n'ọdọ mmiri a ma ama nke nwere mmiri dị ọcha ma doo anya.
Anyị nwekwara ike iji ụgbọ mmiri rute ebe ahụ agwaetiti ọzọ nke Gozo, ebe enwere isi obodo, ochie Rabat, nke a na-akpọ taa Victoria. N’ebe a ị nwere ike ịhụ Katidral nke Santa María ma ọ bụ Obí Bishọp. Agwaetiti a bụ ebe windo Blue a ma ama nọ, nke anyị ga-ekwu maka n'okpuru.
N'ihi na ndị niile na-atụ anya ịhụ ama Window Azure ebe a gbakwara ihe nkiri si Game nke n'ocheeze, enwere akụkọ ọjọọ. Ma ọ bụ na akwa mmiri a dị n'oké osimiri dara n'afọ gara aga na oké ifufe na ebili mmiri, na-ahapụ Malta na-enweghị otu n'ime ihe nnọchianya ya. Ugbu a enwere ike ịhụ windo a na-acha anụnụ anụnụ na foto ahụ, mana anyị nwere ike ịga na ebe ahụ iji hụ etu ọ dị, n'ihi na ọ ka bụ mpaghara nke oke mma okike.
Na Malta ị nwere ike ịga obodo ụfọdụ, na mgbakwunye na Valletta, dị ka Senglea, nke nwere mgbidi ochie nwere nnukwu echiche. Cospicua bụ obodo ochie ọzọ na okpuru ulo, ulo uka na otutu ebe ichoro imuta akuko nke agwaetiti a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » Mee atụmatụ njem dị ukwuu na Malta